Su'aalaha Su'aalaha U-Qalmitaanka Macaashka | Carewell SEIU 503
Soo ogow dheefaha aad xaq u yeelan karto wax ka yar hal daqiiqo adoo adeegsanaya su'aalaha u-qalmitaanka ee hoose.
Xulo dheefaha hoose si aad u buuxiso foomka su'aalaha
Shuruudaha xaq u yeelashada waxay la mid yihiin dheefaha ilkaha, Aragtida + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha (DVE). Si aad u hesho gargaarka, waxaad u baahan tahay inay shaqeeyaan saacado loo baahan yahay ee shaqada balbalada iyo cusboonaysiiso macluumaad la Benefits Xafiiska Maamulka iyo Gobolka.
Waa inaad shaqeysid ugu yaraan 40 saacadood laba bilood oo xiriir ah si aad ugu-qalanto dheefahaan. Marka aad buuxiso shuruudahan, waxaa jiri doona mudo hal bil sugitaan ah kadib markaad keento waraaqahaaga shaqada iyo / ama foojarada mushahar bixinta. Inta lagu jiro muddadan sugitaanka, Gobolka, Acumen ama PPL waxay saacadahaaga u soo sheegi doonaan Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka.
Haddii aad soo sheegto eber saacadood laba bilood oo isku xigta i caymis, waxaad waayi kartaa u-qalmitaanka.
Haddii aadan weli helin dheefahaan, buuxi foomka su'aalaha si aad u ogaato haddii aad u-qalanto iyo in kale.
Ilkaha, Aragtida + Maqalka, iyo U-qalmitaanka EAP
Su'aalahaan waxay ku weydiinayaan tirada saacadaha shaqada ee u-qalma ee aad u baahan tahay si aad ugu qalanto dheefaha Ilkaha ee Carewell, Vision + Hearing, iyo Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha ("DVE"). Saacadaha shaqada ee uqalma - oo sidoo kale looyaqaano saacadaha gorgortanka - waa saacadaha shaqada ee ay bixiyaan Acumen, DHS iyo / ama PPL ayagoo ka wakiil ah macmiilka aad u shaqayso.
Miyaad shaqaysay ugu yaraan 40 saacadood bishiiba laba bilood oo isku xigta?*
Miyaad rogaysay waraaqahaaga shaqada iyo / ama foojarrada mushaharka dhammaadka xilli kasta oo lacag bixin ah?*
Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka waa inuu ka helaa saacadahaaga Gobolka ama iibiyahaaga mushahar bixinta (PPL) si aad ugu qalanto dheefaha DVE.
Ma ku jirtaa Barnaamijka Kala-doorashada Madaxa-bannaan ee u adeegsada Acumen mushaharkooda?*
Haddii aadan maqlin barnaamijka, waxay u badan tahay inuusan adiga ku khusayn.
Carewell SEIU 503 Faa'iidooyinka Gargaarka Kharashka Daryeelka Caafimaadka (HCA) ayaa loo sameeyay si loo caawiyo daryeelka guriga iyo shaqaalaha taageerada shaqsiyadeed ee ka shaqeeya Oregon si ay u bixiyaan khidmadaha caymiska caafimaadka iyo kharashyada caafimaad ee jeebka.
Faa'iidadan waxaa heli kara oo keliya daryeel-caafimaadeedka guryaha ee u-qalma iyo shaqaalaha taageerada shaqsiyeed ee leh Medicare ama iibsatay shaqsi caymiska caymiska caafimaadka ah. Sanadka 2021, Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaad wuxuu daboolayaa $6,500 kharashyada jeebka ka baxa ee sheegashooyinka hoos imanaya Medicare ama qorshaha caymiska caafimaadka u qalma ee Suuqa. Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka sidoo kale waxay bixisaa khidmadaha bilaha ah ee saafiga ah ee loogu talagalay qorshaha u qalma Suuqa, iyo qayb ka mid ah khidmadaha Medicare.
Haddii aadan caymis ku jirin, waxaa laga yaabaa inaad sugto illaa Diiwaangelinta Furan (Nov. 1 - Dec. 15) ka hor intaanad iska qorin qorshaha Suuqa. Markaad isqorto, waxaad bilaabi kartaa inaad hesho dheefaha Gargaarka Kharashka Daryeelka Caafimaadka si ay kaaga caawiso inaad iska bixiso khidmadaha caymiskaaga caafimaadka iyo kharashyada caafimaad ee jeebkaaga laga daboolo.
Si aad u aragto haddii aad u-qalmi karto, dhammaystir su'aalaha u-qalmitaanka ee hoose.
U-qalmitaanka Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka
Su'aalahaan waxay ku weydiinayaan tirada saacadaha shaqada ee u-qalma ee aad u baahan tahay si aad ugu qalanto manfacyada Daryeelka Caafimaadka ee Daryeelka Caafimaadka ("HCA"). Saacadaha shaqada ee uqalma - oo sidoo kale looyaqaano saacadaha gorgortanka - waa saacadaha shaqada ee ay bixiyaan Acumen, DHS iyo / ama PPL ayagoo ka wakiil ah macmiilka aad u shaqayso.
Miyaad shaqaysay 40 saacadood ama ka badan bishii laba bilood oo isku xigta?*
Xafiiska Maamulka ee Faa'iidooyinka waa inuu ka helaa saacadahaaga Gobolka ama iibiyahaaga mushahar bixinta (PPL) si aad ugu qalanto.
Adigu hadda ma ka diiwaangashan tahay, ama xaq u leedahay inaad iska qorto caymiska caafimaadka?*
Haa, waxaan ka diiwaangashanyahay caymiska caafimaadka AMA caymis ma lihi laakiin waxaan xaq u leeyahay inaan isku qoro nooc caymis ah (oo aan ka ahayn caymiska caafimaadka ee Suuqa).
Maya, caymis kama lihi mana lihi wax caymis caafimaad ah.
Waa noocee caymiska caafimaadka ee aad leedahay ama aad xaq u leedahay inaad iska qorto?*
Loo shaqeeyaha ama caymiska dugsiga
Qorshaha caymiska gaarka ah ee Suuqa Caafimaadka
Diido inaad dhahdo
Qaado foomka su'aalaha u-qalmitaanka si aad u ogaatid haddii aad u-qalanto PTO.
Xaq u yeelashada Waqtiga Mushaharka Leh
Su'aalahaan waxay ku weydiinayaan saacadaha shaqada ee u qalma ee aad u baahan tahay si aad ugu qalanto manfacyada Carewell SEIU 503. Saacadaha shaqada ee u-qalma - oo sidoo kale loo yaqaanno saacadaha wax-gorgortanka - waa saacadaha shaqada ee ay bixiyaan Acumen, DHS iyo / ama PPL iyaga oo ka wakiil ah macmiilka-loo-shaqeeyahaaga.
Miyaad shaqaysay ugu yaraan 80 saacadood mid ka mid ah bilahaas: Janaayo, Febraayo, Maarso, Abriil, ama Maajo 2020?*
Miyaad u gudbisay foomkaaga W-9 Xafiiska Maamulka Gargaarka?*
Sababtoo ah waxtarkaaga PTO waxaa loo tixgeliyaa dakhli canshuur laga qaadi karo, Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka waxaa laga yaabaa in looga baahdo inuu soo xareeyo ogeysiiska macluumaadka ee IRS ee ku saabsan dheefaha PTO ee lagu siiyo. Si loo dhammaystiro diiwaangelintan, Hay'addu waa inay haysataa Foomkaaga W-9 oo dhammaystiran.
Maya / Ma hubo
Si aad xaq ugu yeelatid faa'iidooyinka Carewell, Xafiiska Maamulka ee Faa'iidooyinka waa inuu lahaadaa magacaaga, jinsigaaga, Lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti, taariikhda dhalashada iyo cinwaanka hadda kujira faylka. Buuxi foomka Cusboonaysiinta Macluumaadkaaga hadda si aad macluumaadkaaga u cusbooneysiiso.